हाइड्राफेसियल: छालालाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउने एक प्रविधि हाइड्राफेसियलमा डिभाइसको सहायताले पोर्सबाट फोहोर, सीबम र मृत कोशिकाहरू हटाइन्छ र एन्टी-अक्सिडेन्ट सिरम थपिन्छ। यो उपचार धेरै चरणहरूमा पूरा हुन्छ। शनिबार, वैशाख २४, २०७९
सही ढंगले फेसियल नगर्दा बिग्रेला अनुहार फेसियल भन्नासाथ सम्पूर्ण अनुहारको उचित हेरचाह र सफाई भन्ने बुझिन्छ। फेसियलले अनुहारलाई सुन्दर, सफा, चम्किलो र नरम बनाउँछ। आजको व्यस्त र भागदौडको जीवनमा मानिसले आफ्नो हेरचाह गर्न सक्दैन। बुधबार, चैत २, २०७८
अनुहारको सौन्दर्य बढाउने १० घरेलु तरिका पदण्ड भन्दा बढी केमिकल राखिएका सामाग्रीले रोगको शिकार पनि बनाएका छन्। तर साइडइफेक्ट नहुने र घरमै सहजै पाइने तरिका प्रति भने सौन्दर्यका पारखीहरुको ध्यान गएको पाइदैन। मंगलबार, चैत १, २०७८
छाला हेरचाह दिनचर्या किन महत्वपूर्ण छ? के समावेश गर्नुपर्छ? हामीले दिनहुँ छालाका कोशिकाहरू फ्याँक्ने भएकाले छालालाई चम्किलो र स्वस्थ राख्न महत्त्वपूर्ण छ। छाला हेरचाहको दिनचर्याले त्यो काम गर्नेछ। शुक्रबार, फागुन २०, २०७८
अनुहारमा दाग छ? यी हुन् हटाउने २० तरिका पाकेको मेवाको भित्री भागलाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँदै जानुका साथै अनुहार चम्किलो बन्दै जान्छ। मंगलबार, फागुन १७, २०७८
दसैँमा अनुहारको हेरचाह कसरी गर्ने? स्वस्थ छालाका लागि अपनाउनुपर्ने ९ सुत्र दसैँमा लगाइने टिका, टिका बनाउने अबिर र जमराले हाम्रो छालामा केहि असर गर्न सक्छन्। टिका बनाउने अबिरमा हुने रसायनले छालामा एलर्जी गरि छाला चिलाउने, पोल्ने, दुख्ने, बिमिरा आउने, पानी फोका आउने, घाउ हुने, घाउ निको हुँदा सेतो दाग छोड्ने हुन सक्छ। बिहीबार, असोज २८, २०७८
घाममा अनुहार डढ्न नदिने उपाय: सनस्क्रिन कस्तो र कसरी लगाउने? गर्मीमा छाला कालो हुने मात्रै होइन, चायाँपोतो आउने र अनुहारमा कालो धब्बा बस्ने समस्या हुन सक्छ। छालामा चिल्लोपना बढी देखिन्छ। यो मौसमका कारण हुने नियमित प्रक्रिया भए पनि धेरैलाई समस्या लाग्छ। बुधबार, भदौ ९, २०७८
अनावश्यक रौं हटाउने विधि वाक्सिङ कसको शरीर कुल र कसैका शरीर हिट हुन्छ। कुल बडी छ भने छिटै नै रौं निकालिएको प्वाल बन्द हुन्छ। तर हिट बडी छ भने वैक्स गरेपछि लामो समय प्लाल बन्द हुँदैन। शनिबार, साउन १६, २०७८
वर्षातमा कपाल स्याहार्ने १३ सामान्य घरेलु तरिका वर्षातको यो समयमा कपालको सुन्दरता कायम राख्न निकै समस्या पर्छ। विशेषगरी युवतीहरुलाई वर्षातमा कपाललाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको पाइन्छ। मंगलबार, साउन ५, २०७८
दाह्री काट्दा के नगर्ने? – गालामा साबुन दलेर कपाल काट्ने गर्नाले दाह्री राम्रोसँग नकाटिने, छाला क्रमशः बिग्रिदै जाने गर्छ। त्यही भएकाले सेभिङ क्रिम नै लगाउनुपर्छ। शनिबार, असार २६, २०७८
सौन्दर्य: 'ह्यान्डसम' हुन रोक्ने स–साना ५ गल्ती राम्रो लुगा लगाउने, कपालका नाँनाभाँती डिजाइन गर्ने र अनुहार पनि सक्दो राम्रो देखाउने। ठूला कुरामा ध्यान दिने पुरुषहरु सदा सानातिना कुरामा चुक्छन्। जसले गर्दा महिलालाई आकर्षित गर्नुका साटो विकर्षित गर्छ। मंगलबार, असार २२, २०७८
ट्याटु बनाउनु अघि यी कुरामा ध्यान दिऔँ कुनै पनि ट्याटु बनाउँदा यसमा रंगिन मसी र विभिन्न साइजका सुई, ट्याटु मसिनको प्रयोग हुन्छ। ट्याटु बनाउँदा शरीरमा चोट लाग्ने र यसको मसी लामो समयसम्म रहने हुँदा ट्याटु बनाउनु अघि विभिन्न कुराको जानकारी अति आवश्यक छ। शनिबार, असार १९, २०७८
कपालको जरामा नपर्ने गरी कन्डिसनरको प्रयोग कन्डिसनरको प्रयोग गर्दा कपालको जरामा पार्नुहुँदैन। पाँचदेखि सात मिनेटसम्म राखेपछि राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ। यदि कन्डिसनर राम्रोसँग पखालिएन भने कपाल झर्ने, चायाँ पर्ने लगायतका समस्या आउन सक्छ। शनिबार, फागुन २२, २०७७
छाला सुख्खा हुनबाट जाेगाउने यी चार होममेड फेस मास्क साबुनको धेरै प्रयोग, तातो पानीले नुहाउँदा पनि छाला सुख्खा हुन्छ। कुनै बेला पोषणको कमी, प्रदुषण र धूलो धूँवाका कारण पनि छाला रुखो हुन सक्छ। सुख्खा छाला हेर्दा पनि राम्रो देखिैदन। शुक्रबार, फागुन १४, २०७७
छालाको सुन्दरता बिगार्ने यी ४ बानी छालालाई हानि पुर्‍याउने विकिरण सूर्यले वर्षभरि नै फाल्ने भएकाले जाडोमा सनस्क्रिन क्रिम लगाइएन भने अनुहार, घाँटी, गर्धन र हातको छाला बिग्रिन सक्छ। आइतबार, फागुन ९, २०७७
गर्भावस्थामा कस्मेटिक कति सुरक्षित? कस्मेटिक पदार्थमा पाइने पिथालेट्स, पाराबेन र लिडले गर्भवतीमा अरु समस्या थपिदिन्छ। निम्न रसायनका बारेमा गर्भवती सावधान हुनुपर्छ। शनिबार, फागुन १, २०७७
जाडोमा अनुहार सुन्दर बनाउने जुक्ति अनुहारको सुन्दरता मानिसको स्वास्थ्य अवस्थासँग पनि जोडिएको हुन्छ। शनिबार, माघ २४, २०७७
कसले गर्न हुँदैन कपालमा कलर? सुन्दर देखिनु हरेक मानिसका लागि अपरिहार्य बनेको छ। समयमा आएको परिवर्तनले मानिस अन्य मानिसका अघि आफूलाई सबैभन्दा राम्रो देखाउन चाहन्छ। समाजमा बनाइएको सुन्दरताको विविध मापन मान्ने हो भने त्यसको सुरुवात कपालबाट हुन्छ। शनिबार, पुस ११, २०७७
मुस्कान फर्काउने उपचार पछिल्लो समय प्रमुख स्वास्थ्यभित्र पर्ने दाँतको उपचारका लागि विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन्। जसले जस्तोसुकै दाँत पनि मिलाएर राम्रो बनाइदिने गर्छन्। अहिले यसरी बिग्रेका दाँतको उपचार गराउन अभिभावक पनि साना नानी लिएर दन्त विशेषज्ञ कहाँ पुग्छन्। सोमबार, माघ ६, २०७६
घामले डढेको छाला सुन्दर बनाउने ११ उपाय गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ। यो समयमा स्विमिङ पुल, सामुद्रिक किनार, पिकनिक र अन्य बाह्य गतिबिधिमा जान मन पराउँछन्। तर, योसँगै घाममा डढ्ने समस्या पनि आउँछ। घाममा ड्ढ्नबाट बच्न वा डढिसकेको छालालाई जोगाउन निम्न उपाय अप्नाउन सकिन्छ शनिबार, वैशाख २८, २०७६
दीपिकाको सौन्दर्य राजः प्रशस्त तरकारी खाने, मस्त निदाउने ‘हेभी मेकअप’ नगरेको अवस्थामा दीपिका काली छिन् । घाँटी र छातीका देखिने भागमा अनेक सौन्दर्य सामग्री दलेर उनले आफूलाई सार्वजनिक स्थानमा उज्यालो देखाउने गरेकी छिन्। बुधबार, माघ १७, २०७४
यस्तो छ नर्स जानकी श्रेष्ठको सौन्दर्य यात्रा ​ मिस नर्समा सहभागी भएपछि जानकीलाई कस्मेटिक नर्सका रुपमा काम गर्ने मौका मिल्यो। उनले त्यस बेलासम्म नेपालमा कस्मेटिक नर्स भनेर कोही नभेटेको बताउँछिन्। सोमबार, माघ १, २०७४
छालाका लागि डे–क्रिम र नाइट क्रिम अहिलेको वातावरणको नकारात्मक असरबाट आफ्नो सुन्दरता जोगाएर राख्न अर्थात चाउरीपना हटाउन, त्यसलाई चम्किलो एवं मुलायम राख्न छालाको राम्रो स्याहार गर्नुपर्छ। यसका लागि डे एवम् नाइट क्रिमको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिहीबार, चैत १३, २०७०